सह गोत्रीसँग विवाह गर्न किन हुँदैन ? विवाह गर्नको लागि कति गुण मिल्नुपर्छ ? « Lokpath
२०७७, ६ फाल्गुन बिहीवार १२:०९
सह गोत्रीसँग विवाह गर्न किन हुँदैन ? विवाह गर्नको लागि कति गुण मिल्नुपर्छ ?
प्रकाशित मिति : २०७७, ६ फाल्गुन बिहीवार १२:०९
काठमाडौं । हाम्रो धर्मशास्त्रमा एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । गोत्र शब्दको अर्थ हो वंश र कुल । विषेश गरेर गोत्रको कुरा उठाउँनुको उदेश्य भनेको कुनै पनि व्यक्तिको वंशसँग वा पुर्खासँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहनु हो । जस्तै तपाईको गोत्र भारद्वाज हो भने त्यस्को अर्थ हो तपाईँको वंश वैदिक ऋषि भारद्वाजबाट शुरु भएको हो । अर्थात् तपाई भारद्वाज ऋषिका सन्तान भित्र पर्नुहुन्छ ।
हाम्रा अग्रज तथा बुवा आमाहरुले हामीलाई एकै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने चलनबारे बताइरहनु भएकै हुन्छ । किन एउटै गोत्रमा किन विवाहमा गर्नु हुँदैन । हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौ ।
सह गोत्रीसँग किन विवाह गर्नु हुँदैन ?
भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, काश्यप, सप्त ऋषिको नामले चिनिन्छन् । यसमा आठौं ऋषि अगस्तिका सन्तान ‘गौत्र’ भनेर चिनिन्छन् ।
विवाहमा गोत्रको ठूलो महत्व छ र विवाह गर्नुअघि वा बर बधुको विवाहको कुरा चलाउनु अघि एउटै गोत्र पर्छ कि पर्दैन सबै बुझेर मात्र हाम्रा अग्रजहरुले कुरा चलाउँनु हुन्छ । पुराणमा उल्लेख गरिएको छ कि यदि कुनै बर वा बधु सहगोत्री छन्÷छिन् भने विवाह गर्ने अनुमति जतिसुकै प्रेम भएपनि दिनु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा केटा केटीको मन परापर भएर प्रेम हुने, प्रेमपछि विवाहको कुरा चल्दा गोत्र एउटै भएर विवाह रद्ध हुने अवस्था पनि आउँदछ ।
त्यसैले विवाह छिन्ने समयमा गोत्रको ख्याल गर्नुपर्छ । गोत्रको सम्वन्ध रगतले निर्धारण गरेको हुन्छ अर्थात जानीबुझी एउटै गोत्रकी केटीलाई बिहे गरेमा केटो जातिभ्रष्ट हुन्छ । एकै गोत्रका स्त्री, पुरुष, भाइबहिनी हुन् र उनीहरूका बीच विवाह हुनु भनेको हाडनाता भित्र विवाह हुनु हो ।
मत्स्य पुराणका अनुसार ब्राह्मणको साथमा सहगोत्रीको विवाह भयो भने अनिष्ठ हुने उल्लेख छ । धर्मसूत्रमा भनिएको छ ‘संगौत्राय दुहितरेव प्रयच्छेत’ अर्थात समान गोत्रका पुरुषलाई कन्या दिनु हुँदैन । असमान गोत्रीयसँग विवाह नगरेमा ब्राम्हण च्युत हुन्छ । यस्ता जोडीबाट सन्तान पनि गतिला जन्मदैनन् । जानी जानी सहगोत्री विवाह गरेमा महापाप लाग्ने र च्युत हुने समेत धर्म शास्त्रमा उल्लेख छ । एकै कुल र गोत्रमा विवाह गर्ने मानिसको बुद्धि भ्रष्ट हुने र तिनका सन्तान पनि चण्डाल हुने मान्यता छ ।
सहगोत्रीसँग विवाह गर्नु नहुने कुरा विज्ञानले पनि मानेको छ र विज्ञानले भन्छ फरक गोत्रबाट नयाँ नयाँ विचार धाराको जन्म हुन्छ । एउटै कुल वा गोत्रमा विवाह गर्ने दम्पतीको सन्तानमा आनुवंशिक दोष हुन्छ र उनीहरूमा एकैखाले विचारधारा हुन्छ ।
विवाह गर्नको लागि कति गुण हुनुपर्छ ?
विवाहलाई पारिवारिक मिलनको रूपमा लिइन्छ । एउटी स्त्री र एउटा पुरुषले सँगै जीवनयापनका निम्ति आपसी सम्झौता गरेका हुन् भन्ने अर्थमा विवाहलाई हेरिन्छ । अहिले केही व्यक्तिलाई तोकिएअनुसार साक्षी राखेर २० वर्ष उमेर पुगेका बर र बधुको कानुनी विवाह गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।
मनुस्मृति लगाएत अन्य शास्त्रमा विवाहलाई दुई आत्माबीचको पवित्र मिलन भनेको छ । आफूले चाहेर मात्र नहुने । देखेको नपाइने, लेखेकै हुनुपर्ने तथा विवाहका लागि सूर्य भगवानले नै तोकिदिएको हुने कुरा उक्त स्मृतिमा चर्चा छ । स्कन्धपुराणको केदारखण्डको श्रीस्वस्थानीले पनि यही विचारलाई समर्थन गरेको छ । हाम्रो समाजमा विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदायअनुसार विवाह कर्ममा केही फरकफरक संस्कारहरू पाइन्छन् तर सामान्यतया हिन्दूधर्ममा वा ज्योतिषशास्त्रमा विवाह गर्नको लागि वर र कन्याको कति गुण हुनुपर्दछ यसै बिषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
बर र बधुको जन्म समय अनुसार तयार भएको चिनामा वर्णको १, वश्यको २, ताराको ३, योनिको ४, मैत्रीको ५, गणको ६, भकूटको ७ र नाडीको ८ गरी जम्मा ३६ गुण मध्ये १८ भन्दा धेरै प्रप्तांक आएमा ज्योतिषीको परामर्षमा विवाह गर्ने निश्चय हुन्छ । गुणका अतिरिक्त केटाकेटीको मांगलिक स्थिति समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । लग्नकुण्डलीको १, ४, ७, ८ तथा १२ स्थानमा मंगल ग्रह विराजमान भए मांगलिक हुने र मांगलिक केटाको मांलिक केटीसँगमात्र विवाह गर्नुपर्ने शास्त्रीय मत रहेको छ ।
अन्यथा वैवाहिक सुखमा कमी आउँने शास्त्रीय मत रहेकाले कुम्भ विवाह, कलश विवाह, तुलशी विवाह आदि विधिले दोष निवारण गरी विवाह गर्ने गरिन्छ । तरपनि मांगलिक भङग भएको अवस्थामा भने मांगलिक नहुने ज्योतिष शास्त्रमा लेखिएको छ ।
बर र बधुको राशि गणना गर्दा बरकोबाट बधुको राशि ८, १२ भयो भने पनि विवाहको राम्रो मानिन्न । जस्तै बरको राशि मेष रहेको छ भने मेषबाट ८ गन्दै जादा वृश्चिक राशि ८ पर्न जान्छ । त्यस्तै मेष राशिबाट बधुको १२ औँ राशि मिन राशि हुन्छ । यानिकी आफ्नो राशिबाट गन्दै जादा ८ औँ राशि र १२ राशिको व्यक्तिसँग भरसक विवाह नगर्नु राम्रो मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा विवाह गरेमा ऋण, रोग तथा संकटले जीवनमा प्रभाव पार्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्यो. दुर्गा भण्डारी
अब क्यान्सरको उपचारका लागि विदेश धाउनुपर्दैन : दुर्गा प्रसाईं
काठमाडौं । विकसित देशमा क्यान्सर लागेमा लगभग ७० प्रतिशत बिरामी बाँच्ने तथ्यांक छ
एक्लोपनले सतायो ? विज्ञले सुझाए केही उपयोगी टिप्स
काठमाडौं । एक नयाँ अनुसन्धानले पत्ता लगाए अनुसार हप्ताको केही दिन मात्रै १०
काठमाडौं । काठमाडौंस्थित तारकेश्वर नगरपालिका–१ साङ्लामा फेरि बर्डफ्लू भेटिएको छ । यही फागुन
ल्वाङको अचुक फाइदा : टाउको दुखेकोदेखि पेटमा ग्यास भरिँदा छुमन्तर पार्छ !
काठमाडौं – ल्वाङ हेर्दा सानो हुन्छ तर यो चिया मसलाको वा कुनै तरकारीको
भन्सार छली ल्याएको झण्डै तीन लाख मूल्य बराबरको कपडासहित दुई…
पेट्रोलियम पदार्थमा १० महिनामा नौ पटक मूल्यबृद्धि, आन्दोलनमा उत्रने अनेरास्ववियुको…
दाहाल-नेपाललाई महेश बस्नेतको सुझाव- ‘चाँडो पार्टी फुटाएर सांसद जोगाउ’
पृतनापति समन्वयात्मक बैठक बुधवारदेखि
भागरथी प्रकरण: अनुसन्धान अन्तिम चरणमा
धादिङमा जिउँदै महिलालाई खाडलमा पुरेर डोजर चालक फरार
के प्रधानमन्त्रीलाई 'सेक्युरिटी थ्रेट' छ ? ओलीको अभिव्यक्तिपछि
राति सुत्नुअघि नियमित ल्वाङ खाऔँ अनि हेरौँ चमत्कार
तानातानमा सांसद्, पैसा लिने कि मन्त्री ?
सुत्नुअघि अपनाउनुहोस् यी उपाय, तत्काल घट्न थाल्छ तौल